I-JW Library: Indlela Yokukrwelela (iOS) | Uncedo KUJW.ORG/XH
Njengoko ufunda uncwadi kwiJW Library, ungawakrwelela amagama okanye amabinzana.
Landela le miyalelo ukuze ukrwelele:
Zimbini iindlela zokukrwelelela.
Cinezela phezu kwegama ukuze ulikrwele. Ungasebenzisa ezi mpawu ukuze uphelele apho ufuna ukuphelela khona xa ukrwela. Kwezi zinto zivelayo, cofa le ndawo inemibala; emva koko ukhethe umbala ofuna ukukrwelela ngawo.
Xa ukrwelela igama okanye ibinzana, cinezela apho liqala khona uze utsale uyofika apho liphela khona. Njengoko usiya apho liphela khona, uyalikrwelela. Xa ugqibile, imibala iphinda ivele. Ungakhetha umbala ukuze ukrwelele okanye uwucime.
Ukuze utshintshe umbala, cofa kwindawo ekrwelelweyo uze ukhethe omnye umbala. Ukuze ususe umbala, cofa le ndawo ikrwelelweyo; emva koko ucofe uphawu lokugqibela.
Ezi zinto zakhululwa ngoNovemba 2015 neJW Library 1.6, ehambelanayo neiOS 7.0 okanye ezilandelayo emva kwayo. Ukuba awuziboni ezi zinto, nceda ulandele imiyalelo ekwinqaku elithi, “Sebenzisa IJW Library​—Kwi-iOS,” ngaphantsi kwendawo ethi, Fumana Izinto Ezintsha.